श्रीमानले विदेशमा कमाएको ६० लाख लिएर श्रीमति टाप, अनि श्रीमानको मोबाईलमा श्रीमतीकै परपुरुषसंगको ….. हुरहुर्ती आएपछि (भिडियो) – Halkhabar kura
६ पुष २०७७, सोमबार ०२:२५
श्रीमानले विदेशमा कमाएको ६० लाख लिएर श्रीमति टाप, अनि श्रीमानको मोबाईलमा श्रीमतीकै परपुरुषसंगको ….. हुरहुर्ती आएपछि (भिडियो)
श्रीमान विदेशमा दुःख गर्ने घरमा श्रीमतीले अर्कैसंग माया पिरती गाँस्ने । यो त हिजोआजको नेपालको चलन जस्तै भईसकेको छ । सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ को रुकुमकोटमा एउटा यस्तो घटना घटेको छ जुन घटना सुन्ने सबै दंग परेका छन् । यस्ता घटनाहरु प्राय फिल्मी पर्दाहरुमा देख्ने गरेका छौं । तर रुकुमकोटमा फिल्मी पर्दामा देखिने घटना वास्तविकतामा नै घटेको छ । जुन कुरा पत्याउन जो केहीलाई पनि त्यत्ति सहज भने हुँदैन ।
खासमा घटना के थियो भने एक दिन मोबाई खेलाएरै बसिरहेका धर्मराज शाहीको मोबाईलमा एउटा नचिनेको नम्बरबाट फोटो आउँछ । दुर्भाग्य त्यो फोटो उनकै श्रीमती सुशीला शाहीको अ’र्ध’न’ग्न फोटो हुन्छ । जुन फोटोमा सुशिलाको पछाडि पट्टीको भाग पठाईएको हुन्छ । जुन भागमा सुशिलाले ट्याटु खोपेकि छन् ।
विदेशको भूमिमा धर्मराजले खुन पसिना बगाएको झण्डै ११ वर्ष हुन लागेको रहेछ । श्रीमानले उता दुःख गर्ने यता श्रीमतीले श्रीमानको कमाईमा यस आराम गर्नुका साथै अर्कैसंग माया पिरती गाँस्ने । अर्कैसंग माया पिरती गाँसेकी धर्मराजकी श्रीमती सुशिलाले धर्मराजले दुःख गरेर कमाएको ६० लाख रुपैया बोकेर नाठोसंग भागिदिईन् । पिडित धर्मराजले आफ्ना दुःखका कुरा यसरी सुनाउँछन् ।
Previous विना पैसा यी नेताहरुले बाउआमालाई दागबत्ती पनि दिन्नन !
Next प्रचण्ड-माधवकै सामुन्ने लाग्यो यस्तो नारा ‘बिद्या तेरो सिन्दुर खोई…केपी ओली तेरो’…(भिडियोसहित)